ဆွမ်းမွှေးရွက်အုန်းနိူ.ကျောက်ကျော ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ဆွမ်းမွှေးရွက်အုန်းနိူ.ကျောက်ကျော( Pandan Jelly with coconut Milk)
ရေ.............................၁ လီတာ(သို.) ၄ ခွက် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး
ကျောက်ကျောမှုန်..........၆ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ဆွမ်းမွှေးရွက်အရည်........ ၂၀၀ မီလီလီတာ
ဆွမ်းမွှေးရွက် ၂၀၀ မီလီလီတာ ရဖို.ဆွမ်းမွှေးရွက် ၂၀ ရွက်လောက်ကို ပါးပါးလှီးပြီး..ရေနှင့်အတူရောပြီးဖျော်ရည်ကြိတ်စက်မှာကြိတ်ပြီး..ဇကာနဲ.
ချန်ပြီးသကြား၊ ဆား၊ ရေ၊ အုန်းနို.တို.ကိုရောကျိုပါ။